🎺 Music | Booqo Hultsfred
Bandhig faneedkii ugu halyeeyga badnaa Iswiidhan ayaa ku dhashay halkan. Laakiin degmada muusikada Hultsfred ayaa intaas ka badan. Marka laga soo tago dhacdooyinka muusiga iyo ciidaha, waxaa jira bandhigyo, Iswiidhishka Rock Archive iyo garoon muusig lagu ciyaaro. Ma rabtaa inaad ku noolaato Festifaalka Hultsfred? Socodkeena dhexgalka ah ee Hultsfred - Socodka waxaad dareemi kartaa inuu dhulka heer Hawaii mar kale lulanayo. Ku soo dhowow adduunka muusikada!
Hultsfred - Socodka
Sheekada Bandhig faneedka ugu caansan Iswiidhan! Sheekooyin, sawiro iyo muuqaalo filimaan ah oo laga soo qaaday kaydka muusiga Kaydka dhagaxa ee Sweden ayaa hadda loo beddelay raad socod jireed oo ku yaal dhulka dabbaaldegyada caadiga ah ee ku teedsan harada.
Beerta nasashada ee Hultsfred waxay ku jirtaa dareenka muusikada, halkaas oo ardayda ka socota Lindblomskolan ay sawireen sawiro si ay ugu soo jeediyaan waxa ay rabeen inay u ekaato. Agagaarka jardiinada waxaa ku yaal maxkamado boules iyo goobo cagaaran oo wanaagsan.
Hoyga Macaan Hultsfred
Bandhiga "Home Sweet Hultsfred" oo sheegaya sheekada ururka Rockparty iyo Festival Hultsfred. Sheekadu waxay ku taal gidaarada! Bandhiga ku saabsan Rockparty iyo Hultsfred Festival waxaa laga heli karaa qolka Klubben ee gudaha
"Muusig ayaa hawada ku jira" (Heesta Hultsfred)
Waxaan ku aragnaa xiddig qof walba. Stefan baska, gudaha Hanna oo ku taal adeegga daryeelka guriga oo aan ugu yaraan adiga kugu ahayn! Kooxda kaftanka ah ee Infallet tarjumaadda muusiga waxay muujinaysaa sida cajiibka ah
Waa muusigga dhigay Hultsfred khariidada mana jirto meel kale oo Hultsfred ka mid ah oo muusiggu u dheer yahay darbiyada sida Hotell Hulingen. Anaga
Diiwaanka Rock Rock
In ka badan nus milyan shay oo la xiriira muusigga caanka ah ee Iswiidhan. Halkan waxaad ka heli doontaa cajalado, boodhadh, cajalado fiidyow, buugaag, xiise - iyo Kurt Olsson labiskiisii ​​asalka ahaa! Iswiidhish